Indlela Hlalani Izixhobo Garden kwimilo Great - China Richina
Indlela Hlalani Izixhobo Garden ikwimo Great
Uthando ukuba egadini yakho? Ekubeni egadini zithandwa kakhulu ezi mihla, akukho ezingasemva amaninzi abangenawo patch ubuncinane enye, imbiza, okanye isikhongozeli ngento ezikhula kulo. Kodwa mhlawumbi, wena ukuba bahlawule imali eninzi ingqalelo izityalo zakho hayi kangaka izixhobo ozisebenzisayo ukukhula kwabo. Trowels, amagaba, iifotsholo, nemihlakulo kuthatha ixesha elininzi kakubi ngexesha lokukhula, ukuba uthatha ixesha elincinane ukuba abathande, baza basebenza ngcono kwaye ixesha elide kuwe.
Ngaphambi kokuba sithethe gear yomyezo sele unayo, khumbula xa uthenga Izixhobo ezintsha Ukulima ukuba uchitha ngaphezulu kwi izixhobo ezikumgangatho ophezulu kuya kongela wena intlungu kunye nemali ekuhambeni kwexesha. Hlawula extra encinane isixhobo eya kuhlala, kunokuba izixhobo cheap ukuba uya kuphelelwa kwaye kufuneka kufakwe rhoqo. Kwaye emva koko uzisebenzise ngokufanelekileyo! Njengoko isisho, xa konke kukho ihamile, yonke into ikhangeleka ngathi isikhonkwane-kodwa usebenzisa isixhobo into oko ayenzelwanga ukwenza yindlela ekhawulezayo ukonakalisa okanye makayiqhawule (yaye uzenzakalise kule nkqubo) . A umhlakulo elide-ngayo ayikho umgqala, ngasemva ngezembe ayisiso ihamile isileyi, yaye pruner isandla ayenzelwanga wabona kwisebe elinye-intshi. Ukuba ufuna ukwenza into wayeyifihla yakho yangoku izixhobo is phezulu kuze, cinga ukuthenga into efanelekileyo, ngokuboleka umhlobo, okanye uyarenta elinye libe iiyure ezimbalwa (isisombululo omhle izixhobo ezobuchwepheshe akayi kuzifuna rhoqo).
Emva kokuba iseti Izixhobo Ukulima elungileyo, nanga 6 iindlela ezilula ukuzigcina, kuqalwa yokugcina!
A ishedi yi best friend sisixhobo ngenxa emva kakubi, utshaba inani omnye izixhobo kukuba sesichengeni iziqalelo. Kulinga njengoko kusenokuba ukushiya izixhobo zakho apho kuya kufuneka ukuba ngomso (okanye kwiveki ezayo) kuni, don`t kwenze oko! Gcina zonke izixhobo zakho eshedini, igaraji, okanye iyunithi yokugcina isixhobo nemozulu egadini (a yeposi yasemaphandleni yenza wayeyifihla enkulu nemozulu Isixhobo ngesandla), kwaye baya kuhlala amaxesha amaninzi ixesha elide ngaphezu izixhobo ankcitho ixesha kule ilanga, imvula, umoya (okanye angabe engceni ende ndize aqabele).
yokugcina wangaphandle imanyumnyezi nezibambo zomthi, nto leyo roughen, iintanda, yahlula, naselusingeni lokoluka, kunye nokubola ngokuhamba kwexesha. Le ndawo Isixhobo-yokugcina efanelekileyo likhusela izixhobo zakho imozulu kodwa ivumela ukujikeleza umoya, ngoko izixhobo koma namhlwa nangesihumba mancinane amathuba ukuze kwenzeke.
Gcina Them Clean
Umhlaba ubamba ukufuma kwaye ikhuthaza namhlwa, ngoko ukubeka izixhobo zakho zihlambulukileyo uya kubanceda ukuba athathe ixesha elide ukuphelelwa. Leyo ke yindlela elungileyo ukuthintela amasuntswana kweengcambu yokhula imbewu okanye izifo lomhlaba-ezisuka edluliselwa ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Ngaphambi kokuba ubeke izixhobo zakho kuhlamba ngaphandle nawuphi na umhlaba, okanye bawuphose Yicime ngemela putty (ugcine omnye nganye kwiindawo zakho yokugcina isixhobo). Sebenzisa bemthandele (kunye turpentine kancinane, ukuba kuyimfuneko) ukususa izityalo incindi kunye nentlaka ngakuwe izixhobo. Ukomisa izixhobo icocwe, ingakumbi naliphi intsimbi kunye namalungu zomthi, kunye bemthandele izifunxi.
Nqanda ukwanda kwezifo
Ukuba sele esebenza ngezinto izityalo ngokucacileyo ababesifa, hlala izixhobo zakho icocwe kumxube wesiqingatha ngokukhuhla utywala kunye namanzi isiqingatha imizuzu emihlanu ukuya ukubulala naziphi na iintsholongwane phambi kokuba yaphuse izixhobo kunye izibeke.
Yenza Them Sharp
Inkoliso abapheki elungileyo bayazi ixabiso imela ebukhali, kodwa uyaqaphela bangaphi begadi ukuba izixhobo ezibukhali ukwenza imisebenzi igadi ngokukhawuleza, lula, kwaye kwezinye iimeko ezingcono nkqu nezityalo? Ukugcina kumngcipheko omhle ngamakhuba okanye ngesandla pruner kulula kwaye uya konga ixesha ekuhambeni kwexesha. Musa ukulinda de sixhobo yakho buthuntu: Cinga elizilolayo njengoko imihla yokuxukuxa ngenxa izixhobo zakho!
Qala ngokujonga ngohlangothi ikhaba. izixhobo ezininzi mcaba kwicala elinye angled (beveled) kwicala reverse; nezinye izixhobo ziye engile egqithe macala omabini. Bagcine engile i "Wotho." Ngaba esibukhali kwaye ezingcakacileyo njenge ngemela okanye nje kanye edge tsolo kwindawo engile ucacise ngakumbi? Injongo yakho ukugcina uqwalaselo yokuqala.
Baby I Metal Parts
Uninzi izixhobo metal bayazuza ukutyabeka obhityileyo yeoli ukuthintela nomhlwa, ngaphandle kokuba ukuba ezenziwe insimbi, nto leyo omzimba kuyo. Gcina itoti yeoli linseed kwi intlabo yakho eliphalala kunye bemthandele ethambileyo, nokunika izixhobo zakho zicocwe olukhawulezayo-kanye phambi ngokubeka kwabo kude. Nceda don`t ioli motor ukusetyenziswa kwi izixhobo zakho! Inala iincwadi zegadi nangoku isincomo, kodwa ngaba ngokwenene ufuna ukuba ukubeka oyile motor emhlabeni yakho igadi entle? Ngokuqinisekileyo don`t.
Ukuba ubona mhlwa, sebenzisa i ucingo ibhrashi okanye ilaphu elilukhuni (uhlobo njenge fayile isikhonkwane njo ilaphu endaweni khadibodi esetyenziswa yi besiNyithi) ukuyisusa. Unako kwakhona uyiva kude ngesanti ezinamafutha. Gcina ibhakethi eyomeleleyo ngokupheleleyo lesanti ogalelwe ioli egazini lakho, yaye ndihlise nje isixhobo icocwe ibe njengentlabathi izihlandlo ezimbalwa. Yiloo kaninzi kuthatha zombini Polish neoli izixhobo zakho ngexesha elifanayo.
Imeko izibambo zomthi
isicelo Ngamaxesha yayisoma obhityileyo neoli linseed ukuba zome, nezibambo unpainted somthi kwaye buff off nayiphi excess bemthandele acocekileyo ngosuku olulandelayo. A ukusingatha kakubi badlula uya ekufakeni kakhulu nentwana yeoli, ngoko makongeze ukutyabeka obhityileyo imihla de kukho ioli leentlanganiso phezu ngosuku olulandelayo. Ukuba awukwazi ukufumana ioli linseed evenkileni iintsimbi ekuhlaleni, amabombo yokugcina ukutya zendalo yengingqi yakho. namafutha Flaxseed ukuba kupheka yinto efanayo linseed oyili "lin" njengokuba "ilinen," ifayibha eyenziwe yeflakisi. Le ke yindlela elungileyo ukusebenzisa nayiphi na oyile endala flaxseed ekhishini lakho ukuba kuphuhliswe incasa off.